ဂြိုလ်သား h3 + FM11RF08 + TK4100 Composite Chip ကဒ်, 9662+IC + ID ကိုသုံးကြိမ်နှုန်း Card ကို, LF + HF + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Composite ကြိမ်နှုန်း Card ကို, RFID Tri-အကြိမ်ရေ Card ကို, RFID Multi-protocol ကိုကတ်, ဂြိုလ်သား h3 + IC + ID ကိုသုံးကြိမ်နှုန်း Card ကို
LF + HF + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Composite ကြိမ်နှုန်း Card ကို, RFID Multi-protocol ကိုကတ်
dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို 9662+IC + ID ကိုသုံးကြိမ်နှုန်း Card ကို, ဂြိုလ်သား h3 + FM11RF08 + TK4100 Composite Chip ကဒ်, LF + HF + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Composite ကြိမ်နှုန်း Card ကို, RFID Multi-protocol ကိုကတ်, RFID Tri-အကြိမ်ရေ Card ကို
RFID Multi-protocol ကိုကဒ်, ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်း RFID ချစ်ပ်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေး protocol များအတိုင်းလိုက်နာ, မှတ်ပုံတင်အောင်မြင်ရန်, ဒေတာသိုလှောင်မှု, encryption ကိုသော့နှင့်အခြားကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်.
RFID Chip: ဂြိုလ်သား h3 + FM11RF08 + TK4100
frequency: LF 125KHz, HF 13.56MHz, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz
မှတ်ဉာဏ်: 96နည်းနည်း / 512bit + 1KByte
ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ: ISO / IEC 14443A, ISO ကို 15693, ISO / IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
LF နှင့် HF ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးအကွာအဝေး: 2.5~ 10cm (အဆိုပါအင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်ကဒ်စာဖတ်သူကိုနှင့်ဆက်စပ်သော)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးအကွာအဝေး: >8M က (အဆိုပါအင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်ကဒ်စာဖတ်သူကိုနှင့်ဆက်စပ်သော)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 85 ℃(စိုစွတ်ခြင်း 90%)
အရွယ်: 85.5× 54 × 0.84mm, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: PVC / ကို ABS / PET / PETG / စက္ကူ, 0.13 ကြေးနီဝါယာကြိုး
encapsulated ဖြစ်စဉ်ကို: Ultrasonic လှိုင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံလိုင်းများ, အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ခြင်း
အဆိုပါဂြိုလ်သား h3 + FM11RF08 + EM4102 သုံးကြိမ်နှုန်းပေါင်းစပ်ကဒ်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF chip ကို tags များ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်, High-အကြိမ်ရေချစ်ပ်များနှင့်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း chip ကိုဝင်းလက်ရှိအမြင့်ဆုံးနည်းပညာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်, အများဆုံးပြည့်စုံ functional ဖြစ်စေစမတ်ကဒ်. main features တွေဖြစ်ပါတယ် "တဦးတည်းကဒ်နှင့်ပိုပြီး," လုံခွုံသော, အဆင်ပြေ, ဝတ်ဆင်ယဉ်, အစာရှောင်ခြင်းအသုံးပြုခြင်း: access ကိုထိန်းချုပ်ကတ်များ, ကားရပ်ခြံ, ကော်ဖီဆိုင်ထမင်းစားခန်းကတ်များ, VIP အဖွဲ့ဝင်ကဒ်များနှင့်အခြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း, ဘဏ်များ, ကျောင်းများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ.
ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်း RFID ချစ်ပ်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေး protocol များအတိုင်းလိုက်နာ, ဒါ tri-အကြိမ်ရေကဒ်ကိုလည်း RFID Multi-protocol ကိုကဒ်ဟုခေါ်သည်, မှတ်ပုံတင်အောင်မြင်ရန်, ဒေတာသိုလှောင်မှု, သော့နှင့်အခြားကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်.
FM11RF08 (ဖူဒန် M1) Mifare 1k S50 chip ကိုနှင့်သဟဇာတ chip ကို.
EM4102 chip ကိုနှင့်သဟဇာတ TK4100 chip ကို.
စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များအရ, အဆိုပါ tri-အကြိမ်ရေကဒ်ထဲကနေရွေးချယ်ဖို့မျိုးစုံချစ်ပ်ရှိပါတယ်, နှင့်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF chip ကိုဂြိုလ်သား h3 သို့မဟုတ် Impinj M4, ဒါကြောင့်အပေါ် M5 နှင့်.
high-အကြိမ်ရေ chip ကို Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifare Ultralight10, Mifare Ultralight ကို C, ငါကုတ် SLI ကို / SLI ကို-S က / SLI ကို-L ကို / SLIX, Mifare Desfire2K / 4ဋ / 8K သည်, MFlPLUS2K / 4K သည်, အများဆုံး 213 နောက် ... ပြီးတော့. low-အကြိမ်ရေ chip ကို EM4200 သုံးနိုငျ, EM4305, EM4450, EM4102, TK4100, ဒါကြောင့်အပေါ် T5577 နှင့်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် LF + HF + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Composite ကြိမ်နှုန်း Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, RFID Multi-protocol ကိုကတ်
prev: UID + T5577 / EM4305 / 5200 dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို, ထပ်ခါတစ်လဲလဲဖယ်ပျစ်ထားသည်-Write
နောက်တစ်ခု: LF + HF Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို, IC Chip + ID ကို Chip Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို, FM11RF08 + EM4102 Composite Chip ကဒ်